Kedu ihe DMAA ntụ ntụ ji mee ihe na bodybuilding? | AASraw
/blog/DMAA/Kedu ihe DMAA ntụ ntụ ji mee ihe na bodybuilding?
Ihe na 02 / 11 / 2018 by Dr. Patrick Young dere na DMAA.
Kedu ihe DMAA ntụ ntụ?
DMAA, aha mmiri: Methylhexanamine ma ọ bụ 1,3-dimethylamylamine bụ ụbụrụ nke ahụ ji mụbaa ike ọkwa na mmelite abụba ọnwụ.DMAA bụ ngwakọta organic nke sitere na geraniums. N'ihi nke a ka ndị na-emepụta ihe na-emekarị na-akpọ ya geranium mmanụ ma ọ bụ geranium wepụ, mana ọ bụ mara ọtụtụ aha ndị ọzọ gụnyere methylhaxaneamine na geranamine.
Ọ nwere mmetụta dị ike nke na-akpali akpali nke nwere ike ime ka ọ bụrụ ihe dị oké ọnụ ahịa nye bodybuilders na ikike ya dị ka ọkụ ọkụ na-eme ka ọkụ na-eme ka ndị mmadụ na-achọ ihe mgbapụta dị arọ.
Ọ bụ ezie na a na-ewerekarị DMAA dị ka nke kachasị mma, ọ ga-ekwe omume ịmepụta ihe mwepụ n'okpuru ọnọdụ nyocha. E kwuola na DMAA nke nwere ihe odide ugbu a karia ụdị ọdịdị ahụ.
Otu ụlọ ọrụ na-agbakwunye (ndị na-adịghịzi arụ ọrụ) kwukwara DMAA synthetic si ngwaahịa, na-azọrọ na ọ na-esite n'aka geraniums. Ndị ọkà mmụta sayensị amụọla ihe a ma gosi na ha bụ ụgha. Enweghị ụzọ ọkwa nke DMAA na ngwaahịa ndị ahụ nwere ike isi na ihe ndị sitere n'okike.
Kedu ihe dị ọcha DMAA ntụ ntụ?
DMAA Powder, bụ ụdị kristal kristal ọcha. Dịka ihe onwunwe nke DMAA, nnukwu ntụ ntụ DMAA bụ otu n'ime ọkụ na-ere n'etiti ngwaahịa ndị ahụ, ọ bụghị naanị n'ihi ụkọ ntụpọ DMAA, kamakwa ọhụụ nke elu dị ọcha nke DMAA raw, ee, ma ọ bụrụ na m zụrụ DMAA nnukwu ntụ ntụ maka ire ere, ma ọ bụ ụlọ nyocha, ana m ahọrọ zụta DMAA raw online, họrọ otu DMAA a pụrụ ịdabere na ya ịzụta sistemụ ma nọgide na-enwe mmekọrịta mmekọrịta.Details nke DMAA nnukwu ntụ ntụ nkọwa n'ime AAS dị ka:
Ụdị Mkpụrụkpụ: C7H17N.HCl
Molekụla arọ: 151.68
Kedu ihe DMAA ntụ ntụ mere?
Dika ihe eji eji DMAA eji eme ihe, DMAA bu ihe kachasi ike nke kachasi ike (CNS) nke na-eme ka ume di elu dika nke caffeine, mana o na-eme ihe di iche. Ọ bụ ezie na usoro DMAA na-eme ka ike ghara ịdị ọkụ abụghị 100% ụfọdụ, ihe ka ọtụtụ ná ndị nchọpụta kwenyere na DMAA na-akpali noradrenaline (norepinephrine) na ụbụrụ. Tinyere adrenaline (epinephrine), noradrenaline bụ otu n'ime "ọgụ ma ọ bụ ụgbọ elu" nke anụ ahụ nke a napụtara n'oge nsogbu (nke a na-achụso jaguar!). FYI, noradrenaline bụ "nyocha" nke bụ catecholamine, kama ọ na-arụ ọrụ dị ka hormone na neurotransmitter n'ime ahụ nke ahụ na-emepụta site n'ugwu ndị dị n'elu akụrụ gị. Dika ogwu na-adrenal na-agbaputa ihe noradrenaline n'ime obara, obi obi, ogbugba obara, na obara na-abanye na nkwonkwo nkwonkwo ogwu. Ntọhapụ nke noradrenaline na-akpalikwa glucose ka a tọhapụ gị n'ụlọ ahịa glycogen na ahụ gị, bụ nke a pụrụ iji mee ka ahụ ike gị dịrị n'oge mmega ahụ. N'ihe gbasara mmetụta ndị a na-ahụ anya, noradrenaline budata mma ilekwasị anya, anya, mkpali, nche, ume, na oge mmeghachi omume. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, Nke a bụ otu n'ime isi ihe mere ndị mmadụ ji hụ DMAA n'anya na ihe ọkụ ọkụ - ị na-enwe mmetụta dị ukwuu na inwe ume na-adịghị agwụ agwụ iji nweta ọrụ! Maka oge nke mmetụta ndị a, DMAA dị ogologo ma dị ngwa karịa caffeine, ma ihe ọzọ mere ndị mmadụ ji eji ya.
Uru ntụ ntụ DMAA maka Fat Burning
Ọ bụ ezie na a maara DMAA ka ọ na-arụ ọrụ dị ka ọkụ ọkụ ọkụ, ike ya nwere ike ịba ụba mgbe ejikọta ya na ihe ndị ọzọ dị ka caffeine, ụfọdụ nchọpụta na-egosikwa na ike DMAA na caffeine nwere ike ime ka ọnụọgụ mita nke 35% ma melite abụba ike ọkụ site na 169% (ma e jiri ya tụnyere otu ebe).
Enwere ike ịba ụba n'ọtụtụ ụzọ. N'ezie, ahụ nwere ike ịkpalite ya n'enweghị mkpa maka ịgbakwunye ma mee oge ọ bụla ụkọ calorie na-eme. N'ezie, nke a bụ ihe mere calorie ji achịkwa nri dị ezigbo mkpa maka ịnwụsi ike.
Ngwunye na-ere ọkụ na-enye ihe na-eme ka abụba na-ebute ngwa ngwa karịa ka ọ dị ma ọ bụ n'ọnọdụ ebe ọkụ ọkụ agaghị ebute. N'ihe gbasara DMAA, a na-enweta mmetụta site na ịme ka usoro ihe nhụjuanya na-akpali akpali n'ụzọ dị iche iche nke na-ewepụta ngbanye nke ịgbanye n'ime ya nke na-emezu mmetụta a chọrọ.
Uru ntụ ntụ DMAA maka Na-arụ ọrụ n'ahụ
Dị ka ihe ọ bụla na-akpali akpali, DMAA nwere ike ịba uru mgbe a na-ewere ya tupu oge mgbatị ahụ n'ihi na ike ọrụ ọ na-eweta nwere ike ime ka onye ọrụ nweta ogo dị elu nke ọzụzụ. N'agbanyeghị nke ahụ, ọ pụkwara ịnye uru ọzọ nwere ike iyi ka ọ naghị arụ ọrụ.
Ọtụtụ akpụkpọ ahụ na-emepụta - O (nitric oxide) boosters akpan akpan - e mere iji nye vasodilation. Nke a bụ usoro nke na - eme ka mmụba ntakịrị na dayameta nke arịa ọbara na - eme ka ahụ nwee ike ịnweta ikuku oxygen na ihe oriri.
DMAA bụ vasoconstrictor, ya mere, ọ bụ naanị nke ahụ. Obere ọbara nwere ike belata ihe oriri ndị dị na ahụ ike, ma ọ na-akwalitekwa ọbara ọbara na ahụ ike na ụfọdụ ndị na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ dị mma.
Ebee ka ịzụta nnukwu puirty DMAA ntụ ntụ?
N'ezie m akọrọla ụzọ maka ọtụtụ oge, ma a ka nwere onye na-amaghị, ya mere, ana m akọrọ ọzọ.
Nke mbụ, gbalịa chọọ 20 DMAA kachasị ihe ntanetị, ma gbalịa ịmatakwu ụfọdụ nkọwa, mana maka ntụgharị.
Nke abụọ, gbalịsie ike ịchọta google, youtube, pinterest, na ụfọdụ dị mkpa forums, ihe mere m ji adabere na nke a? Ebe ọ bụ na ụlọ ọrụ dị ntụ ntụ na nke a pụrụ ịdabere na ya, ha ga-eme ka ọnụnọ ha nwee mmetụta nke ndị mmadụ. foto na blọọgụ ... .Ha bụ ihe àmà dị ike ..
N'ihi ya, ịchọta ụlọ ọrụ AAS, ọrụ ọrụ DMAA na-arụ ọrụ, na nnukwu mma na ọrụ dị mma.
Ejighariri ihe omumu nke biotechnology nke ohia na 2008, bu nke 5 Chinese Ph na-acho ya na XNUMX Chinese Ph. Dọkịta, ndi a na-acho na Chemical Engineering na Mahadum Tulsa, Oklahoma, USA..Main ngwaahịa: anabolic steroid raw raw , nkwonkwo ahụ, nkwonkwo, ụkọ abụba, hormones sex, SARMS, ọgwụ PCT, HGH, homebrew, ugl.Anyere ihe m maara, Mgbe ị kpebiri ịzụta DMAA ntụ ntụ site na AAS, ihe ị ga - eme bụ:
1.Visit AAS website, họrọ ngwaahịa ịchọrọ, ma hapụ ozi gị na ozi na weebụsaịtị AAS, wee nyefee ya, Ahịa Ahịa AAS ga-azaghachi gị na 12 awa mgbe ị natara ozi gị, mgbe ahụ kwuo okwu.
2.Just zipu ozi-e ma ọ bụ zipu ozi na whatsapp na ndị na-arụ ọrụ na AAS, dịka Demi, mgbe ahụ na-ekwu n'ụzọ zuru ezu, banyere ịdị ọcha, oke, Mbupu, adreesị, họrọ ego kwesịrị ekwesị, a ga-eziga ihe n'ime 12 awa mgbe ịkwụ ụgwọ , mgbe ị kwụrụ ụgwọ, ị ga-enweta nọmba ọnụọgụgụ, yana ahịa ahịa AAS ga-eme ka ị gbanwee n'oge, mgbe ahụ ọ dị gị mkpa ịnọdụ ala n'ụzọ dị mfe, chere maka ngwugwu gị.
3.AAS bụ ụlọ ọrụ dị na China, maka nchekwa, ọ bụrụ na ị nwere enyi na China, ị nwekwara ike ka ndị enyi gị gaa na ụlọ ọrụ ha, na-ekwu okwu n'ụzọ zuru ezu, ma nweta ihe ị chọrọ.
Mmetụta nke Clostebol Acetate ntụ ntụ: Ntak ndị mmadụ hụrụ Tbol? Ọ bụ eziokwu na Modafinil na-enyere ụbụrụ aka na-arụ ọrụ nke ọma Mgbe ọ nwụsịrị?